Nagarik News - सेकेन्डह्यान्ड स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ? यी कुरा ख्याल गर्नुहोस्
सेकेन्डह्यान्ड स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ? यी कुरा ख्याल गर्नुहोस्
26 Apr 2016 | 16:00pm
सेकेन्ड ह्यान्ड स्मार्टफोनको आजभोली आफ्नै बजार छ। मानिसहरुले महंगा स्मार्टफोन किन्न कम गरेपछि कम्पनीले सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टलाई बजारमा लैजाने सोच बनाएका छन्। जब तपाई सेकेन्ड ह्यान्ड मोवाइल किन्ने सोच्नुहुन्छ त्यतिबेला सावधान हुन भने जरुरी छ।
अनलाईन बजारमा सेकेन्ड ह्यान्ड स्मार्टफोन पाइने हुँदा यसलाई खोज्न त्यति गाह्रो पनि छैन। किन्नु भन्दा पहिले कुन अपरेटिङ सिस्टमको मोवाइल किन्ने हो त्यो तय गर्न जरुरी छ। एन्ड्रोइडको कुन अपरेटिङ सिस्टम र स्क्रिन साइज चाहिने हो त्यो छान्न जरुरी छ। सुरुमै आफ्नो बजेट तय गरियो भने फोन किन्न झन् सजिलो हुने नै भयो।
जब कुनै ब्रान्डका फोनको नयाँ मोडल बजामा आउँछ त्यसको केही समय पछि पुराना मोडल बजारमा आउने गर्छन् त्यसलाई पनि खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ।
यदी अनलाइन मार्फत सेकेन्ड ह्यान्ड मोवाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको रिटर्न पोलिसि छ या छैन भन्नेबारे बुझ्नुहोस्। ताकी एक दुई दिन मोवाइल चलाए पछि फिर्ता गर्न सकियोस्।
फोन किन्ने समय आफ्नो सीम कार्डलाई मोवाइलमा चेक गर्नुहोस्। यसो गर्दा डिभाइसले काम गरेको छ या छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर यसबाट फोन चोरीको हो या होइन भन्ने पत्ता भने लाग्दैन। फोन चोरीको नभएको किक्रेताबाट ग्यारेन्टी लिनुहोस्।
फोन किन्न जाने समयमा ल्यापटप, माइक्रो एसडी आर्ड र हेडफोन पनि सँगै राख्नुहोस्। किन भने यसबाट तपाईले फोनका सबै फिचर्सले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चेक गर्न सक्नु हुन्छ।
फोन हेर्दा मात्र राम्रो देखिएर मात्र हुँदैन। उसका सबै फिचरले काम गर्नु पर्छ। एक पटक फोन कल पनि गर्नुहोस् र म्यासेज पनि। मोवाइलको साउन्ड चेक गर्नुहोस्। मोवाइलको डाटा स्टोरेज क्षमता हेर्न भने नभुल्नुहोस्। फोटो लिनुस् र वाइफाई समेत चेक गर्नुहोस्।